लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाई हुँदै - Everest Dainik - News from Nepal
लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं, असार ८ । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार सुनुवाई हुने भएको छ । आइतबार दिनभरी बहस भए पनि नसकिएकाले निरन्तर सुनुवाई अन्तगरत बुधबारका लागि सारिएको हो । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा गरेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस प्रतिनिधिसभा बैठकः लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग
लोकसेवाले समावेशी सिद्धान्त पालना नगरी स्थानीय तहका लागि विज्ञापन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरू जगदेव चौधरी, विकास ठाकुर र राजाराम घिमिरेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यी सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ । आयोगले गएको जेठ १५ गते देशभरका ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार, १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस एकैपटक तीन सेवामा नामः कसरी सम्भव ? पढ्नुहोस् लोकसेवा अनुभव